စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC က အရေးယူဖို့ တောင်းဆိုကြ — မြန်မာဌာန
စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC က အရေးယူဖို့ တောင်းဆိုကြ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေက လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေ တနေ့တခြား ဆိုးဝါးလာနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူထုအတွင်း မကျေနပ်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်လာနေသလို အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတင် စစ်ဆေးဖို့ ပြောဆိုသံတွေလည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။
လက်ရှိ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသြဇာခံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ဆန္ဒပြနေသူတွေကို ကြိုတင်သတိပေးခြင်း မရှိဘဲ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ တိုက်ပွဲဝင် စက်သေနတ်တွေ၊ ကျည်ဆံအစစ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လက်ဖြောင့်သေနတ်သမားတွေနဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခိုင်းခြင်း စတဲ့ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းမှုတွေကို ကျူးလွန်နေပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဂျင်မီ က ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဆက်လက်ပြီး ခေါင်းငုံ့ခံနေစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
“အာဏာလုစစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ သေချာ ထင်ရှားသွားပြီ ပေါ်လွင်သွားပြီ။ လူနာတင်ယာဉ်တွေကိုပါ စည်းမစောင့်တော့ဘူး၊ အလံဖြူတင်ထားလဲ စည်းမစောင့်ဘူး။ နောက်ဆုံး မြောက်ဥက္ကလာမှာ သုံးသွားတာဆိုရင် Auto Machine Gun တွေ သုံးတာ။ အဲဒါတွေက စစ်မြေပြင်မှာ သုံးတာ။ နောက် လေယာဉ်နဲ့ပါ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ၊ မီးလောင်ဗုံးတွေ ပစ်ချတာ။ စစ်မြေပြင်ပုံစံ ဖြစ်သွားပြီ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ လက်အောက် ရောက်သွားပြီ။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ ရှေ့ဆက်ပြီး အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ထိခိုက်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ထိခိုက်လာရင် ကျနော်တို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို တုံ့ပြန်ခွင့် ရှိတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို သူတို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေကလဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ကျနော်တို့ ခုခံပိုင်ခွင့်အရ တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာ ပြောချင်တယ်။”
ဝါရင့်ရှေ့နေတဦးကတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ Crimes Against Humanity လူသားမျိုးနွယ်စုကို ထိခိုက်စေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ War Crimes စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာ တရားစွဲလို့ရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Rome Statute ရောမသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီ ရောမသဘောတူညီချက် စာချုပ် အပိုဒ် ၄ ရဲ့အပိုဒ်ခွဲ ၂ မှာဖော်ပြထားတဲ့ Special Agreement အထူးသဘောတူညီချက်အရ လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံတခုကနေ ICC ကို အရေးပေါ် အကူညီ တောင်းခံခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ဟာ ၄ ပုံ ၁ ပုံကျော်တဲ့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ICC ကို အထက်ပါ အတိုင်း တရားဝင်အကူအညီတောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ အာဏာသိမ်းကောင်စီကို ရောမသဘောတူညီချက်အပိုဒ် ၇ ရဲ့ အပိုဒ်ခွဲ က၊ င နဲ့ ဇ တွေမှာပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းထိခိုက်စေမှုတွေကို ကျူးလွန်မှုနဲ့ လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေကို လုံးဝမလေးစားတော့ဘူး။ သူ့ကိုတော့ ဥပဒေစကားနဲ့ လုံးဝပြောလို့မရတော့ဘူး။ သူလုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာ။ ၂ဝဝ၈ ကိုလဲ သူပြောတာ သူချိုးဖောက်တယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဥပဒေကိုလဲ ချိုးဖောက်တဲ့အတွက် သူ့ကို ပြည်တွင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ အရေးယူလို့မရတော့ဘူး။ ICC တို့ ICJ တု့ိနဲ့မှတပါး မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲလိုအနေအထားရောက်နေပြီ။”
ရှေ့နေရောဘတ်စန်းအောင်ကလည်း အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အလေးအနက် စဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့ ပြောပါတယ်။
“တကယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ ဥပဒေအကြောင်းအရေးယူတာကို ကျနော်တို့လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်သွားတဲ့အခါကျတော့ တပ်မတော်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလဲ ထိခိုက်တယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလဲ ကျဆင်းစေတယ်။ ပြည်သူလူထုကြားမှာ အမြင်တွေစောင်းကုန်ရင် တည့်မတ်ရတာ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ လူတွေကိုဖမ်းထားပြီဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာကို လွှဲပေါ့။ အပေါ်က ကြတ်မတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒါကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးသင့်တယ်။”
ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လူမဆန်ရက်စက်မှုတွေကို ပြန်လည်ခုခံလိုမှုတွေ အကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမြို့ တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွေက ဝမ်းနည်းခြင်းသပိတ်
ကနီမှာ စစ်ကောင်စီတပ် ပစ်ခတ်လို့ ခြောက်ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံး
မုံရွာ၊ မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ တစ်နေ့တည်း ဘယ်လိုဖြိုခွင်းခဲ့သလဲ
ဖမ်းဆီးခံ ကိုဝေမိုးနိုင်အတွက် မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
U Robert San Aung, Burmese army has no image even if they stand in front ofamirror. They don't understand the concept of image. They care when they choose to care.
Patricia Orlik says:
Please help stop war crime urgently. Soildiers also rooted, robbed, invaded people homes & business in broad day light.